Shirka Horumarinta Kalluumeysiga Soomaaliya oo ka furmay magaalada Garoowe[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Shirka Horumarinta Kalluumeysiga Soomaaliya oo ka furmay magaalada Garoowe[Sawirro]
GAROOWE – Waxaa maanta ka furmay magaalada Garoowe shirweynaha Horumarinta Kalluumeysiga Soomaaliyeed iyo ka hortaga kalluumeysiga sharci darada ah iyo sidii loo xalin lahaa caqabadaha haysta Kalluumeysatada.
Shirweynaha ayaa waxaa ka qeybgalay Madaxda Wasaaradda Kalluumeysiga Federaalka iyo Wasaaradaha Maamul goboleedyada Soomaaliya,wufuud caalami ah iyo illaa lix shirkadood oo Kalluumeysiga ah iyo hay’addo kale.
Waxaa kaloo shirweynahan ka qeybgalay khuburo dhinaca Kalluumeysiga iyo Ammaanka Baddaha ah.
Cabdiwaaxid Maxamed Xirsi oo la taliye sare u ah IGAD ayaa sheegay in shirka sidoo kale looga hadli doono hababka ugu wanaagsan ee looga hortagi lahaa kalluumeysiga sharci-darada ah iyo wixii dhibaya Ummada Soomaaliyeed ee ammaanka Baddaheeda ah.
Shirkan oo muddo saddex maalmood socon doono,waxaana soo qabanqaabisay Shuraako,waxaana la filayaa in gunnaanadka laga soo saaro go’aano lagu horumarinayo Kalluumeysiga iyo Kalluumeysatada Soomaaliyeed iyo Buugga Kalluumeysiga Soomaaliyeed.